9 Antony Maninona ny fampiasam-bola amin'ny lozisialy Marketing referral no fampiasam-bola tsara indrindra amin'ny fitomboan'ny orinasa | Martech Zone
Raha resaka fitomboan'ny orinasa dia tsy azo ihodivirana ny fampiasana teknolojia!
Avy amin'ny kely Neny sy pop fivarotana ho an'ny orinasa lehibe, tsy azo lavina fa ny fampiasam-bola amin'ny haitao teknika dia mandoa be ary tompona orinasa maro no tsy mahatsapa ny lanja entin'ny fampiasam-bola amin'ny teknolojia. Saingy tsy mora ny mijanona eo ambonin'ny haitao mandroso sy rindrambaiko. Safidy maro, safidy maro…
Azonao atao ve, ary ny orinasanao tsy afaka mandoa izany?
Inona no atao hoe fampiasam-bola lozisialy momba ny varotra referral?
Ny tompona orinasa tsirairay avy dia samy misafidy ny toerana sy ny fomba hampiasana ny volany. Mety ho izany rehetra izany manomboka amin'ny fividianana ny lisitra sy ny fandraisana mpiasa, hatramin'ny fividianana ireo fitaovana sy vokatra ampiasainao hampandehanana ny orinasanao. Fa ny fanapahan-kevitra momba ny toerana sy ny fotoana hampiasa vola dia mety ho sarotra.
Tao anatin'ny herintaona, ireo orinasa manao famatsiam-bola amin'ny rindrambaiko fanovozana hevitra dia afaka mahita fitomboana haingana sy taha tombony tsara kokoa. Betsaka ny vokatra lozisialy momba ny varotra referral any izay afaka manamora ny fiainanao sy ny ain'ny mpiasao.
Mpiasa faly = fitomboana bebe kokoa!
Ny "fampiasam-bola" amin'ny rindranasa marketing amin'ny referral dia midika fotsiny hoe fahazoan-dàlana amin'ny rindranasa marketing referral ilaina amin'ny fihazakazahana, ny marketing na ny asa hafa ataon'ny orinasa iray. Matetika, ny tompona orinasa dia manomboka amin'ny fividianana lozisialy marketing referral fa mila mitantana ny orinasa izy ireo eo am-piandrasana ny hividy fahazoan-dàlana ho an'ny rindrambaiko "mahafinaritra hananana" amin'ny dingana manaraka.
Ahoana no anampian'ny fampiasam-bola amin'ny lozisialy marketing amin'ny referral amin'ny fitomboan'ny orinasa?
Na manana fanombohana ianao na CEO amin'ny hetsika multi-conglomerate, tsy ny rehetra no mino ny fiheverana fa ny fampiasam-bola amin'ny rindrambaiko referral dia mandrisika ny fitomboan'ny orinasa ary that it’s arguably the safest investment for any business.
Ireto misy antony sivy araka ny filazan'i Kirsty McAdam; Mpanorina sy CEO an'ny mpitarika rindrambaiko referral, Factory referral iza no mizara ny antony fampiasam-bola amin'ny rindrambaiko referral farany indrindra dia ny zavatra tsara indrindra azonao atao amin'ny fampiroboroboana sy ny paikadim-barotra.
Vakio Martech Zone’s Article About Referral Factory
Antony 1: Mijanona eo alohan'ny lalao referral
Iray amin'ireo tombony tsara indrindra azonao atao amin'ny maha orinasa anao ny mijanona eo alohan'ireo mpifaninana aminao ary ny fomba tsotra indrindra hahatratrarana izany dia amin'ny alàlan'ny fampiasa amin'ny alàlan'ny rindranasa marketing amin'ny referral hampiasaina ny orinasanao. Arakaraka ny maha-tsara ny rindrambaiko fanovozana referansa ampiasain'ny orinasanao no mahakely ny hetsika tanana izay mety tsy maintsy hataon'ny ekipa.
Ny fahazoana dingana amin'ny fifaninanana dia midika fa hisarika mpanjifa bebe kokoa sy hampitombo ny vola miditra aminao ny orinasanao. Eritrereto fotsiny ny fotoana nanombohan'ny tambajotra sosialy ny sehatra fanaovana dokam-barotra. Ireo izay vao nanangana (mampiasa rindrambaiko maranitra handefasana doka an'arivony amin'ny mpihaino kendrena azy) dia nanapotika ny fifaninanana.
Antony 2: Fahombiazana amin'ny fanatsarana
Ny fananana ny rindrambaiko fanovozana referral tsara indrindra dia midika koa hoe hahatonga ny orinasanao hahomby kokoa. Ny fampiasana rindrambaiko vaovao momba ny varotra referral dia mety mitaky bibikely sy fanaintainana mitombo, saingy rehefa mandeha ianao dia hiroborobo ny orinasanao. Farany, ny fanontaniana tokony apetrakao amin'ny tenanao amin'ny maha mpandraharaha anao dia ity;
“Mila manao an'io ve ny olombelona?”
Amin'ny farany, ny fanavaozana ny lozisialy dia hikorisa ambony ambany sy midina ny ambaratongam-pandraharahanao, hahatonga ny orinasanao hihazakazaka kokoa sy haingana kokoa. Rehefa lasa mahomby kokoa ny rafitra marketing, dia mihalehibe koa ny fahafahan'ny vokatra na serivisy. Amin'ny fanaovana orinasa mahomby kokoa, mamorona vintana bebe kokoa amin'ny orinasao ianao hihaona amin'ny fangatahana bebe kokoa amin'ny mpanjifa.
Ny tsara kokoa azonao atao amin'ny fanompoana ny mpanjifanao sy ny akany; ny mpanjifa sambatra kokoa ary ny olona tsara kokoa dia hiresaka momba anao. Farany, ny fanatsarana ny fahombiazan'ny marketing amin'ny referral dia mampihena ny faran'ny lesoka amin'ny famokarana sy serivisy, hahatonga ny orinasanao hahazo vola miditra bebe kokoa amin'ny fanatsarana ny fahatanterahana.
Antony 3: Manolora sehatra azo tsapain-tanana ho an'ny fitomboan'ny varotra referral
Ny fampiasam-bola amin'ny rindrambaiko fanovozana referral dia fanapahan-kevitra hentitra amin'ny orinasa izay afaka mampihena ny fitomboana. Rehefa manomboka orinasa ianao - na inona na inona indostria - manomboka kely ianao. Ny fanantenana dia ny hitomboanao mandritra ny fotoana tsy voafetra, na amin'ny isan'ny mpanjifa na amin'ny vola miditra amin'ny orinasa mihitsy. Tsy misy sehatra hafa manitatra toa ny teknolojia.
Antony 4: Mahazo tombony maharitra amin'ny fanoloran-tena maharitra
Fampiasam-bola amin'ny sehatry ny lozisialy Marketing referral - Mividy ao a programa rindrambaiko referral referral or SaaS means you’re laying a foundation for your business’s success. The money you spend now will grow in value as your business benefits from the investment.
Antony 5: Fanatsarana ny fitazonana ny mpanjifa
Amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny lozisialy marketing referral, azonao atao ny mahatsapa fanatsarana lehibe amin'ny fifandraisana eo amin'ny client-business. Noho ny fizotrany namboarina dia manatsara ny fifandraisana amin'ny mpanjifa hatrany ny rindrambaiko fanovozana referral.
Na amin'ny alàlan'ny mailaka na media sosialy, ny fampiasam-bola amin'ny rindrambaiko fanovozana referral dia manome anao fomba bebe kokoa hanatonana ireo olona kendrenao. Ho setrin'izany, ny orinasanao dia afaka miroborobo amin'ny fampivoarana sy ny fambolena fifandraisana tsara amin'ireo mpanjifa ankehitriny sy mety. Ny rindrambaiko fanovozana referral dia manome ihany koa ny vintana hanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny samy orinasa.
Ny fandraharahana dia mifandraika amin'ny fifandraisana mifandraika mahasoa sy ny fitadiavana fomba hanitarana sy hivoarana. Raha mampiasa ireo fifandraisana ireo amin'ny tombontsoanao ianao, dia mety hahita fitomboana sy fanavaozana goavana ireo orinasa roa ireo. Amin'ny fanapahan-kevitra ara-bola iray dia azonao atao ny manokatra ny varavaranao amin'ny fifandraisana vaovao izay tsy teo ambony latabatra teo aloha.
Antony 6: Ampitomboy ny vokatrao
Orinasa milamina kokoa no mamokatra amin'ny avo kokoa, tsy misy hadisoana ataon'olombelona. Ny orinasanao dia afaka mampiasa rindranasa marketing amin'ny referral ihany koa handaharana ireo lahasa ary hampihena ny fotoana ilaina hanatanterahana tanjona hafa. Amin'ny alàlan'ny rindranasa marketing amin'ny referral dia afaka mizara andraikitra mora foana ianao mba hahazoana antoka fa vita haingana sy mahomby kokoa ny asa.
Antony 7: fidirana amin'ny filaminana tsara kokoa
Orinasa maro no matahotra hacking na fandrahonana amin'ny cyber ary misy antony marim-pototra. Ny teknolojia no mahatonga ireo tahotra ireo ho tena izy. Zara raha mandeha ny andro tsy misy vaovao momba ny hack vaovao manimba sasany. Mifanohitra amin'izany fa ny rindrambaiko no fiarovana tsara indrindra (ny hany?).
Antony 8: Fanatsarana ny varotra
Inona no manome ny orinasao fitomboana lehibe indrindra, misy na tsy misy rindrambaiko?
Marketing amin'ny referral tsara.
Ny zavatra tsara indrindra amin'ny teknolojia dia ny tombony omeny raha resaka marketing amin'ny referral. Manomboka amin'ny fampiroboroboana ny media sosialy ka hatramin'ny doka, ny serivisy fanaovana rindrambaiko amin'ny referral dia ahafahanao manaparitaka ny teny sy mandrisika ny fahatsiarovan-tena momba ny orinasanao haingana.
Serivisy varotra referral marobe no ampiasain'ny mpampiasa an'arivony hitantanana sy hifehezana ny paikadim-barotra. Amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny programa marketing referral toy ireto dia azonao atao ny manatsara ny ezaka ataonao momba ny varotra referral raha toa ka mampiakatra ny fampahafantarana anao.
Antony 9: Manokatra varavarana vaovao
Manokatra varavarana izay mety tsy noeritreretinao ho azo atao amin'ny orinasanao ny teknolojia. Ireo orinasa eo am-piandohan'ny ambaratonga fitomboany dia azo inoana fa hahazo tombony amin'ny fampiasam-bola amin'ny fanavaozana lozisialy vaovao momba ny varotra referral sy ireo mpanavao izay mamorona azy ireo.
Raha tsy misy fampiasam-bola amin'ny lozisialy marketing referral, mety mijanona ny orinasanao rehefa lany andro ny rafitra, miala amin'ny vokatrao na serivisinao ny mpanjifa, na miala ny mpikambana ao amin'ny ekipa noho ny tsy fandaminana.
Ny fampiasam-bola no ivon'ny asa rehetra. Amin'ny maha tompona orinasa na CEO anao dia manapa-kevitra ianao hoe ho aiza ny volanao. Ny fomba tokana itomboan'ny orinasa dia rehefa ny mifamaly dia fitsipika fototra.
Tsy maintsy ataonao fototr'ity fanapahan-kevitra ity ny foto-kevitra mahasoa miaraka amin'ny fanapahan-kevitrao; voalohany indrindra rehefa mampiasa vola amin'ny rindrambaiko referral marketing. Rehefa miverina amin'ny tabilao fanaovana sary ianao amin'ny fanombohan'ny taom-piasana vaovao dia diniho izay fampiasam-bola amin'ny rindrambaiko referral ilainao hatao hampandrosoana ny orinasanao.
Na midika hoe lozisialy kely ho serivisy (SaaS) purchase to streamline your systems or to invest in a long-term partnership with a referral marketing software company, it’s undeniable there’s no time like the present to ask the hard questions. Once you’ve pinpointed where your investment should go, it’s time to make it happen.
Fampahafantarana: Ity lahatsoratra ity dia misy rohy mpiara-miasa amin'i Factory referral.
Tags: Affiliateorinasa fanoratanamarketing amin'ny referralpaikady marketing amin'ny referralantony referralfampitana fifamoivoizana
Niova be ny fiainako tamin'izaho 33 taona. Nisedra sakana mahatsiravina aho tamin'ny dian'ny mpandraharaha. Nahazo fitsapana maimaimpoana teo am-pelatanan'ny media aho ary nomena latsaky ny 10% ny mety hanohizako amin'ny dia ataon'ny mpandraharaha. Aorian'ny fanandramana marobe sy 114 andro any amin'ny helo; Niverina aho. Tsy vitan'ny nitehirizako ny orinasako izay nofidina ho orinasa mpandraharaha faha-332 tsara indrindra any Etazonia tamin'ny 2015 avy amin'ny Magazine an'ny Entreprenur, dia nihodina mafy kokoa aho.